Basy fanorana - Inona no tombony ananany ho an'ny vatantsika | Bezzia
Susana godoy | 10/01/2022 10:00 | beauty
Ny basy fanorana dia lasa iray amin'ireo fitaovana be mpampiasa indrindra amin’ny andro farany. Marina fa teo aloha dia ny atleta mahay ihany no mahazo tombony amin’izany fa ankehitriny dia toa niova avokoa ny zava-drehetra ary amin’ny vidiny tena mora dia efa afaka manana iray ao an-tranontsika isika ary mahazo tombony amin’ny tombontsoa rehetra izay tsy vitsy.
Fantatrao ve ny soa rehetra azony? Satria misy resaka fanampiana ho an'ny manala ny aretin-kozatra. Marina anefa fa mbola manana tombony maro hafa tokony ho fantatrao izy io. Amin'izany fomba izany dia ho fantatrao fa ho mpiara-miasa aminao vaovao izany mba hanome ny vatanao ho mora kokoa sy hampitombo ny fahombiazany. Aleo anefa mandroso tsikelikely mba tsy ho diso na inona na inona.
1 Tena mampihena ny hozatra harerahana
2 Manatsara ny fivezivezena
3 Fanamaivanana aretina mitaiza
4 Esory ny contractures
5 Manatsara ny fivezivezen'ny vatana
6 Fialam-boly bebe kokoa amin'ny fiainanao
Tena mampihena ny hozatra harerahana
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny basy fanorana dia ny miaraka aminy dia hanao veloma ny hozatra harerahana. Rehefa misy harerahana hozatra na faharerahana fibre dia holazainay fa nisy fiofanana mafonja koa taorian’izany. Izany no mahatonga ny fanaintainana hita manerana ny vatana ary noho izany dia fantatry ny basy tsara ny fomba manala azy. Rehefa mandalo izany ianao dia ho hitanao fa hanjavona haingana kokoa izany fahatsapana izany satria manome vahana ny fahasitranana.
Manatsara ny fivezivezena
Amin'ny maha otra azy dia fantatray fa hiaraka aminy izahay fampahavitrihana sy fanatsarana ny mivezivezy. Inona no mahatonga ny vatana manontolo oksizenina araka ny tokony ho izy. Noho izany, tsy ilaina ny mampiasa hery, fa miaraka amin'ny loha sahaza azy ihany, dia afaka mandeha amin'ny tongotra ianao ary manadino ny reraka ao aminy, noho io fanatsarana ny fikorianan'ny rivotra io. Tsy tombony lehibe ve izany?
Fanamaivanana aretina mitaiza
Ny tena fototry ny hery hanaovana veloma ny fanaintainana. Noho izany, tsy misy toy ny fampiharana izany rehefa misy ihany koa aretina mitaiza toy ny arthritis. Ao aminy, ny fanaintainana sy ny henjana dia anisan'ny soritr'aretina mahazatra indrindra. Noho izany, mba hanamaivanana azy ireo dia tsy misy toy ny fanorana malefaka amin'ny fomba haingana sy mahomby toy ny omen'ny basy fanorana.
Esory ny contractures
Tsy ny fanaintainan'ny hozatra ihany no lasibatra amin'ity fitsaboana ity. Ankoatra izany, ny contractures ihany koa ny filaharan'ny andro. Noho ny fandaniana fotoana be mipetraka na noho ny hafainganan'ny fiainana, mahazatra ny fisian'ny fatotra eo amin'ny ampahany amin'ny soroka, vozon-tranonjaza na koa ao amin'ny faritry ny lumbar. Noho izany, ho azy rehetra, ny vibration navoakan'ity basy ity dia iray amin'ireo fitsaboana tsara indrindra. Ataovy veloma ny fihenjanan'ny hozatra.
Manatsara ny fivezivezen'ny vatana
Na dia any amin'ny faritra sasany aza isika dia tsy mandefitra tsara ny fanorana, marina fa amin'ny ankapobeny, ny basy dia iray amin'ireo hevitra tsara indrindra manatsara ny fivezivezena ny vatana manontolo. Satria amin'ny fanalefahana ny fihenjanana rehetra dia ho hitantsika ny fomba ananantsika fihetsehana bebe kokoa satria manafaingana ny fidiran'ny otrikaina rehetra hanatsarana ny tavy. Izany dia miteraka fahasitranana haingana kokoa.
Fialam-boly bebe kokoa amin'ny fiainanao
Raha niresaka momba ny contracture teo aloha isika dia mazava fa tsy maintsy manohy miresaka momba izay rehetra mamokatra azy ireo ary ny iray amin'ireo olana mibaribary indrindra dia ny adin-tsaina. Noho izany noho ny otra, ny gadona sy ny fanerena nataony ho tsikaritray ny fomba hivaha ny vatana sy ny fialan-tsasatra ho tonga eo amin`ny fiainantsika. Mazava ho azy fa amin'ny fanaovana veloma an'izany rehetra izany dia hanana hery bebe kokoa sy hery bebe kokoa isika, noho izany amin'ny basy fanorana dia afaka mahatsapa izany rehetra izany koa isika noho ny loha samihafa izay natao ho an'ny vondrona hozatra samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ny tombony rehetra amin'ny basy fanorana
Ahoana ny fanadiovana ny sofinao